Maamulka Degmada Ceelbuur ” ma jirto meel dad rayid ah lagu laayay”. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Degmada Ceelbuur ” ma jirto meel dad rayid ah lagu laayay”.
MAREEG 7 August 2015
Ceelbuur ( Mareeg)-Nuur Xasan Guutaale Guddoomiyaha degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ayaa beeniyay in ay dad rayid ah wax ku noqdeen duqeymo diyaarado dagaal ay dhawaan ka fuliyeen aaga degmadaas Ceelbuur kuwaas oo ay ku sugnaayeen sida uu hadalka u dhigay Al Shabaab.
Guddoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyay in ay beegsadeen baro cayiman oo ay xogo ka hayeen in Al Shabaab Ciidamadooda iyo Saraakiishooda kaliya ay ku sugnaayeen islamarkaana sida uu tilmaamay aanu ka warqabin ogaantooda in dad rayid ah ay wax ku noqdeen.
Mr Nuur Xasan Guutaale ayaa ku cel celiyay in ay sii socon doonaan howl gallada ka dhanka ah Al Shabaab ee ay ka wadaan deegaanada Ceelbuur ka tirsan.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa howl gallo isugu jira cirka iyo dhulka ay Ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa AMISOM ay ka wadaan deegaanno ka tirsan Gobolka Galgaduud gaar ahaan nawaaxiga Magaalada Ceelbuur ee Gobolkaas iyadoo dhinaca kale Odayasha ku sugan deegaanadaas ay shabelle u sheegeen in duqeymaha ay waxyeello u geysteen dad shacab ah oo ku sugnaa meelaha la duqeeyay walow aan la ogeyn xaddiga uu gaarsiisan yahay khasaarahaas.
Ciidamada DF iyo AMISOM oo la wareegay deegaanno ka tirsan Galgaduud
Madaxda Jubbaland oo la heshiiyay Siyaasiyiinta Gedo+Xil ka qaadis